Faahfaahinta Dhismaha Dhuxul dhagaxa | Lingshou
Faahfaahinta Dhismaha Dharka Dhagxaanta Dhagxaanta
Qalab: Qalabka soo socda waa in la helaa kahor dhismaha. Aad ayey u badan yihiin waxaadna ka heli kartaa dukaamada qalabka dhismaha ama bakhaarada qalabka dhismaha.
Geedi socodka dhismaha:
1.Doqor daweynta heerkulka dildilaaca gidaarada iyo qaybta waxyeellada leh ee guntin;
2. Isticmaal blender si aad iskugu qasiso rinjiga hore iyo midda loo yaqaan 'latex paint';
3.Ka adeegso Primer-ka si siman sagxadda dhismaha adoo isticmaalaya burush cufan;
4.Daji dhismeyaasha xarkaha dhagaxa lagu daydo markay aasaasiga ahi qallalan yahay, ku dabool dusha sare dhismaha cajalado isku dhejinaya iyadoo loo eegayo cabirka loo baahan yahay;
5. Ku adeegso rinjiga cinjirka ah jaangooyada hore adoo isticmaalaya burush, ka dibna ku dabaq calaamadaha midabka leh darbiga buluuga ah ee masaafada u dhexeysa 30-50cm, laakiin 10-20cm dhinaca isgoyska darbiga. (Waa hagaag inaad gacmahaaga ku baahiso ololka midabbada, laakiin hubi in si wanaagsan loo qaybiyo.)
6. Adeegso burush xoqitaan ah si aad uga saarto jajabinta midabada oo aan xirnayn 24 saacadood ee dhismaha kadib. Ka dib ka qaad cajaladaha duubista. U soo jiid cajaladaha dushooda meel u dhow isgoyska si aad uga fogaato in aad saqafka dusha sare u taabatid.
7.Ku dhex dabool maro dusha sare ilaa jaakading waa gabi ahaanba qalalan si looga hortago soo daadashada iyo sidoo kale in la gaaro saameynta dab-damiska, xaqiijinta biyaha, aashitada iyo alkali-iska caabbinta iyo ka hortagga sunta.